जुम्लातर्फ जाँदै गरेको गाडी कर्णालीमा खस्यो — Imandarmedia.com
जुम्लातर्फ जाँदै गरेको गाडी कर्णालीमा खस्यो
दैलेख । सिमेन्ट बोकेर जुम्लातर्फ जाँदै गरेको टिप्पर दैलेख जिल्लास्थित कर्णाली नदीमा खसेर दुर्घटना भएको छ । बा ५ ख २१८३ नम्बरको टिप्पर मंगलबार राति करीव १० बजे आठविस नगरपालिका-४ खोटे सल्ला भन्ने स्थानमा दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ । दुर्घटनामा चालक र सह–चालक बेपत्ता भएका छन् ।
टिप्पर दाङको लमहीदेखी जुम्लातर्फ सिमेन्ट लोड गरी जाने क्रममा खोटे सल्ला भन्ने कर्णाली राजमार्गस्थित कर्णाली नदीमा अन्दाजी १५० मिटर तल पल्टिएको दैलेख प्रहरीले जनाएको छ । ईलाका प्रहरी कार्यालय राकम कर्णाली दैलेखबाट खटिएको प्रहरी टोलीले हराइरहेका चालक र सह–चालकको खोजी कार्य गरिरहेको छ ।
त्यस्तै दाङको घोराही–मुर्कुटी सडकखण्डमा जिप दुर्घटना हुँदा चालकको मृत्यु भएको छ । जिपमा सवार दुईजना घाइते भएका छन् । बा १३ च ८०४८ नम्बरको स्कारपियो जित गएराति घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. ४ को उर्लेकेनी ओरालोमा दुर्घटना हुँदा चालक विष्णु गिरीको मृत्यु भएको हो ।
घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १६ का २८ वर्षीय गिरीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय दाङले जनाएको छ । दुर्घटनामा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका बसन्त भण्डारी र राजकुमार थापा घाइते भएका छन् ।
घाइतेहरुको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराहीमा उपचार भइरहेको छ । राति दुर्घटना भएकाले कसैले थाहा नपाएको र बुधबार बिहान देखेपछि मात्रै घाइतेहरुको उद्धार गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
यस्तै सवारी दुर्घटनामा परी एक प्रहरी जवानको मृत्यु भएको छ।सुनसरीको इटहरीमा मङ्गलबार राति पूर्व–पश्चिम लोकमार्गमा पश्चिमतर्फ आउँदै गरेको को १ च ७८१६ नम्बरको पिकअप गाडीले विपरीत दिशातर्फ जाँदै गरेको को २० प ४६८३ नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा एक प्रहरी जवानको मृत्यु भएको हो।
मृतक प्रहरी जवान झापाको कचनकवल गाउँपालिका–६ का ३३ वर्षीय कमलबहादुर खड्का रहेको प्रहरीले बताएको छ। उनी सुनसरीको इलाका प्रहरी कार्यालय चिमडीमा कार्यरत थिए।
दुर्घटनामा परी गम्भीर घाइते भएका प्रहरी जवान खड्कालाई बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान पुर्याउँदा मृत घोषित गरेको प्रहरीले बताएको छ।